थ्रेडिङ गरेपछि झुकिएर पनि नगर्नुहोस यस्तो ग’ल्ती .. प’छु’ताउ’नुपर्ला जिन्दगीभर ? – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / थ्रेडिङ गरेपछि झुकिएर पनि नगर्नुहोस यस्तो ग’ल्ती .. प’छु’ताउ’नुपर्ला जिन्दगीभर ?
थ्रेडिङ गरेपछि झुकिएर पनि नगर्नुहोस यस्तो ग’ल्ती .. प’छु’ताउ’नुपर्ला जिन्दगीभर ?
admin October 23, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 91 Views
कतिले घरमै पनि थ्रे’डिङ गर्छन्। तर, थ्रे’डिङपछि हुने दु’खाइ र ख’टिराबाट छु’ट्कारा पाउनका लागि आमयुवतीहरूले केही गल्ती गर्छन्। यसबाट पछि उनीहरूले विभिन्न स’मस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ।घाममा ननिस्किने थ्रे’डिङ गराएलगत्तै घाममा निस्किनु हुँदैन। घाममा निस्किँदा विभिन्न सम ’स्या हुनसक्छ । जब हामी श’रीरको कुनै हिस्साको रौं निकाल्छौं, त्यो स्थान पूर्णरुपमा सं’वेदनशील हुन्छ ।
त्यसैले तपाईं यो सम’स्याबाट बच्नका लागि घाममा नि’स्किनबाट जोगिनुपर्छ । मेकअप नगर्ने प्राय महिलाहरूले गर्ने ग’ल्ती यही हो । कुनै पार्टीमा जानुपर्ने छ भने हतार-हतार थ्रे’डिङ गराएर तुरुन्त मेकअप गर्न थाल्छन् । यो बिल्कुल ग’लत हो । यसले छा’लामा स’म स्या आउन सक्छ ।
त्यसैले थ्रे’डिङ गराएको २४ घन्टापछि मात्रै मेकअप गर्नुपर्छ ।औं’ला नलगाउने थ्रेडिङ गरेपछि महिलाहरूले गर्ने अर्को गल्ती के हो भने उनीहरू त्यो स्थानमा बारम्बार टच गरिरहन्छन्। यसो गर्नु निकै हा’निकारक हुन सक्छ । यदि थ्रे’डिङ गरिएको स्थानमा लगातार टच गरियो भने इ’न्फेक्सन हुने, चि’लाउने वा ब्रेकआउट हुने सम’ स्या हुन सक्छ ।
चि’लाउने थ्रे’डिङ गरेपछि महिलाहरू त्यो स्थानमा क’न्याउन थाल्छन् । यसो गर्नु झन् ख’तरनाक हुन्छ । यदि चि’लायो भने पनि स’कभर कन्या’उनु हुँदैन । यदि असह्य हुनेगरी चि’ला’यो भने क’न्याउनुको साटो मसाज गर्नुपर्छ । आफ्नो अनु’हारलाई चिसो पानीले धुनुहोस् र गुला’ब जलमा एलोबेरा मिसाएर यसमा मसाज गरौं ।
यसबाट आँ’खीभौंमा रु’खोपना आउँछ। यसले गर्दा चिलाउने वा पो’ल्ने’ हुन सक्छ । यसबाट बच्नका लागि मोइ’स्चराइजरले म’साज गर्नु आवश्यक छ । यसले तपाईंको आँ’खीभौंलाई थप रा म्रो बनाउँछ।
यो पनि पढ्नुहोस्। कुन म’हिला त्यस्ती होलिन् जसमा मे’कअप गरेर आफ्नो सौ’न्दर्यमा नि’खार ल्याउने तथा ‘बटुल्ने चाहना नहोस् । क’मकाजी होऊन् वा गृ’हिणी, कम स’मयमै मे’क अप गर्न चाहन्छन्, प्रा’कृतिक मेकअप ।
यहाँ ५ मिनेटमै कसरी मेक’अप गर्न सकिन्छ त भनेर बताइएको छ, जसलाई गर्न सजिलो समेत छ । पाउडर पा’उडरको तु’लनामा क्रि’म आ’इस्याडो तथा क्रि’म ब्लस अनले आँ’खा र गा’लाको छा’ला बढी सु’ख्खा देखिने बनाउँछ । केही समयपछि आँ’खाको छा’लामा सु’ख्खा ध’ ब्बा एवं गा’लामा चा’उरी देखाइदिनसक्छ ।
यस्तोमा ला’इट पा’उडर एवं पा’उडर ब्ल’सअन प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । फा’उन्डेसन छा’लासँग म्याच गर्ने फा’उन्डेसन प्रयोग गर्नुपर्छ । मे’कअपको बे’स ठीक भयो भने मे’ कअप प्रा’कृतिक देखिन्छ । ब’जारमा के’क लि’क्विड एवं पा’उडर फाउन्डेसन उपलब्ध छन् ।
आ’इ पे’न्सिल कि’शोरी एवं कम उ’मेरका म’हिलाहरूले आ’इलाइनर लगाउने चा’हना छैन भने क’लरफुल पे’न्सिल ल’गाउन सक्छन् । हिजोआज २ रंगको आइ पे’ न्सिल लगाउने चलन पनि छ ।
स्पेसल लिप कलर अ’नुहारमा तुरुन्त त’रोताजगी ल्या’उनका लागि लि’पस्टिकको रं’ग फेर्नुपर्छ । नियमित ने’चुरल लि’पस्टिक लगाउने गरेको भए रा’तो, मरुनजस्ता फरक रंग लगाउन सकिन्छ । सजिलै बनाउन सकिने कुनै हे’यरस्टाइल तथा रा’तो लि’पस्टिकले लु’क्स ह’ ट देखिन्छ ।
विशुद्ध ब्रा’उन सेड्स आफ्नो आँ’खामा ब्राउन आ’इस्याडो मात्रै लगाउन मन लाग्छ र यसै गरिआइएको छ भने एक पटक मनलाई बुझाइहेरौं र यसको प्रयोग न’गरौं । यो शे’डमा पहेंलो वा रा’तो रंगको केही अं’श हुन्छ तसर्थ यसको प्रयोगले आँ’खा थ’कित थ’कितजस्तो देखिन्छ ।
बरु आँ’खामा वि’शुद्ध ब्रा’उन शेड लगाउनुपर्छ यसबाट लु’क्स प्रा’कृतिक देखिन्छ । ठा’उँअनुसार मे’कअप गरौं अफिस जाँदा मे’कअप हलुका तथा त’रोताजा देखिनुपर्छ । यसका लागि ह’ल्का फा’उन्डेसन प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका साथै आँ’खाको मेकअप गर्नका लागि ब्ल्या’क पे’ न्सिल एवं म’स्कारा प्रयोग गर्नुपर्छ ।
पी’च वा अ’रेन्ज क’लरको लि’पस्टिक प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । अ’फिसका लागि कमभन्दा कम मे’कअप गर्नु राम्रो हुन्छ । पा’र्टी मे’कअपका लागि लि’पस्टिक तथा आ’खाको डि’टेलिङमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । ग’र्मी मौसममा बेलुकाको पार्टीमा जानु छ भने लि’ क्विड वा वा’टरप्रुफ मे’कअप गर्नु राम्रो हुन्छ ।
अ’नुहारमा क’म्प्याक पा’उडर ब्ल’सर लगा’उनुपर्छ । यसका साथै आँ’खामा आ’इलाइनर नलगाई क्रि’मबेस्ड आ’इस्याडो लगाउनुपर्छ । प’रेला चम्का’उनका लागि क्या’स्टर आ’यल प्रयोग गर्नुपर्छ ।
Previous मृत्यु हुनु केहीबेर अघि श्रीमतिलाई फोन गरेर यसो भनेका रहेछन्
Next युएईको एक कम्पनीमा ५०० जना नेपाली कामदारको माग, कस्तो छ तलब हेर्नुस् !